Vaovao - Ny fampiasa sy ny tombony amin'ny akanjo bisikileta
Ny fiasa sy ny tombontsoan'ny akanjo bisikileta
Ny akanjo mitaingina bisikileta dia akanjo azo tanterahina, toy ny fiarovana, ny wick, ny fofonaina, mora sasana, ny fanamainana haingana, sns. Ny akanjo mitaingina bisikileta miaraka amin'ny lamba manokana, miaraka amin'ny tanjaka, haingam-bidy tsara, fanitarana tsara, ary ny fanoherana ny abrasion tsara dia azo raisina ho toy ny fiasa jersey cycling. Ny tampon'ny akanjo mitaingina bisikileta tsara dia tokony hanana fofonaina sy hatsembohana, izay afaka mamoaka hatsembohana be dia be sy manala ny vatan'ny vatana. Ny fehin-tsoavaly an'ny bisikileta dia tokony ho tery, amin'ny fomba mahomby mihena ny havizan'ny hozatra, ary ny pad crotch dia tsy maintsy malefaka ary manana fantsom-pifandraisana tsara. Andao isika hiresaka momba ny antsipirian'ny akanjo kiraro bisikileta.
Mpinamana maro no mieritreritra fa ny lokon'ny akanjo bisikileta dia mazava loatra. Aza mahalala raha antony fiarovana ity famolavolana ity. Ny loko fampitandremana mavo, mena, manga sy fotsy dia be mpampiasa. Ny antony dia rehefa mitaingina eny an-dalana ianao, ny mpamily fiara sy ny mpandeha an-tongotra afaka mahita anao tsara lavitra, ary miezaka ny hisoroka ireo lozam-pifamoivoizana.
Maro ny namana izay nifidy akanjo bisikileta fotsiny no hanontany, maninona no tsy mitovy ny lamba vita eo an-tampony sy ambany ambany akanjo bisikileta? Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny akanjo ambony dia ny manafoana ny hatsembohana, ary ny akanjo any ambany kosa dia ny fanalefahana ny havizanana. Noho ny toetr'andro, rehefa mangatsiaka kokoa ny andro, dia matetika ampiasaina ny lamba mafana, mifoka rivotra ary mahazaka rivotra, na ny lamba mifofofofofofofofofofofofofofofofofofofofona sy fofonaina mifofofofo no ampiasaina amin'ny fampiasana hazo fijaliana araky ny faritra samihafa. Rehefa mafana ny toetr'andro, lamba mamelombelona ny hatsembohana, mifoka rivotra, mora sasana ary lamba fanamainana haingana no safidy voalohany, ary angamba amin'ny fomba fijery ara-pahasalamana dia misy lamba miasa miaraka amin'ny fepetra avo lenta kokoa momba ny fanamorana sy ny fanalefahana. Ireo akanjo mitaingina bisikileta dia tokony ho akaiky ny vatana araka izay azo atao mba hampihenana ny fanoherana ny rivotra araka izay azo atao. Ny akanjo mitaingina bisikileta dia tsy maintsy manana ny anjara asa hiarovana ny vatana ihany koa, ary ny akanjo mitaingina bisikileta dia tsy maintsy ihany koa ny fanoherana abrasion, na dia misy aza ny lozam-pifamoivoizana dia afaka mampihena tena ny faritry ny gorodona. Faharoa, misy ondana ho an'ny pataloha mitaingina mba hisorohana ny fikorontanana maharitra sy ny tsindry eo anelanelan'ny vodiny sy ny seza ary hiarovana ny vatana.